प्रियंका आफैले खोलिन आफ्नो पतिको टप सेक्रेट बानी !! - Experience Best News from Nepal
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आजभोलि फिल्म ‘द स्काइ इज पिंक’ को प्रचारमा व्यस्त छिन् । यसै अवसरमा उनले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेकी छिन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफ्नो जीवनसँग जोडिएका कैयन् कुराको खुलासा गरेकी छिन् ।
अन्तर्वार्ताका दौरान प्रियंकाले आफ्ना पति तथा कलाकार निक जोनसका बारेमा पनि कैयन् राज खोलेकी छिन् । चोपडाले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा निक जोनस भित्री मनदेखि पूर्ण रुपमा पञ्जावी भएको बताइन् । ‘जब निक पहिलोपटक यहाँ (भारत) आएका थिए, यो देश खुब मन पराएका थिए,’ उनले भनिन् ।
साथै प्रियंकाले निक जोनस स्टेजमा जानुभन्दा पहिले के गर्छन् भनेर पनि खुलाइन् । उनका अनुसार निकले स्टेजमा जानुभन्दा पहिले पञ्जावी गीत सुन्ने गरेको खुलाइन् । उनले ड्रेसिङ रुपमा पनि बलिउडका गीत सुन्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
प्रिय‌ंका र निकको जोडी बलिउड र हलिउडमा समेत रुचाइएको जोडी मानिन्छ ।
प्रियंका मिस वर्ल्ड बन्दा उनका पति निक ८ वर्षका !!
जेठाजुको जन्मदिनमा प्रियंकाको चोपडा यस्तो लूक्स
सन्नीसंग ज्योतिले गरिन तुलना, भन्छिन खोई त् मलाई स्वागत !!
बेनिशालाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको गरिमा जोगाउनै मुश्किल !!